किन्न लागि फोन नम्बर एसएमएस प्रमाणिकरण
प्राप्त एसएमएस सन्देश
दर्ता गर्न मा कुनै पनि साइटहरू
Contact Us लग इन
अस्थायी फोन नम्बर प्राप्त गर्न एसएमएस
प्राप्त एसएमएस सन्देशहरू दर्ता गर्न मा कुनै पनि साइटहरू
त्यो आवश्यकता पुष्टि
भर्चुअल फोन नम्बर लागि एसएमएस
किन्न संख्या लागि एसएमएस प्रवेश एक वास्तविक इमेल, एक खाता सिर्जना
र प्राप्त एसएमएस सक्रियता नम्बर ।
तपाईं चाहनुहुन्छ खाता दर्ता गर्न तर साइट आवश्यकता
हाम्रो सेवा संग प्रदान गर्नेछ, फोन नम्बर बाइपास गर्न एसएमएस पुष्टि. तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्राप्त गर्न एक एसएमएस संग एक प्रमाणिकरण कोड ।
यो पाठ संग प्रमाणिकरण कोड पठाइने संख्या तपाईं रोजे र मा प्रदर्शित हुनेछ आफ्नो व्यक्तिगत खाता हाम्रो साइट मा.
अब तपाईं गर्न सक्छन् प्रयोग जोगिन आफ्नो व्यक्तिगत नम्बर खाता सिर्जना गर्न वा दर्ता वेबसाइटहरु मा.
भाडामा संख्या will help you verify मा कुनै पनि साइट वा सेवा. एसएमएस प्राप्त messages online in just 1 minute.
80+ देशहरू मा उपलब्ध छन् हाम्रो सेवा प्राप्त गर्न भर्चुअल देखि संख्या: जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, इन्डोनेसिया, जापान, फ्रान्स र अधिक. , भविष्यमा थप विदेशी देशहरुमा थपिनेछन् भाडा भर्चुअल संख्या ।
फोन नम्बर लागि 20 मिनेट
तपाईं मात्र तिर्न को लागि आगमन पाठ सन्देश. यो समयमा को एक असीमित नम्बर एसएमएस सन्देश पठाउन सकिन्छ चयन नम्बर ।
यो नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ सक्रिय गर्न सबै सेवाहरू साइट मा सूचीबद्ध. चयन को एक तपाईं आवश्यक र प्राप्त एसएमएस पुष्टि गर्न आफ्नो अनलाइन नम्बर । त्यसपछि प्रतिलिपि एसएमएस कोड र पेस्ट मा यो उपयुक्त लाइन जब आफ्नो खाता दर्ता.
API विकासकर्ताहरूको लागि
एकीकृत तपाईँको अनुप्रयोग प्राप्त, संख्या लागि एसएमएस सन्देश. प्राप्त हजारौं एसएमएस को प्रति मिनेट र दर्ता खाता मा सेकेन्ड! प्रयोग हाम्रो एसडीके लागि छिटो र सरल एकीकरण संग हाम्रो multithreaded API.
प्रयोग हाम्रो संख्या रक्षा गर्न आफ्नो गोपनीयता — don' t give out yours.
Don' t let कम्पनीहरु resell आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी.
बलियो इन्क्रिप्सन लागि सबै अनलाइन सत्र ।
Cryptocurrency स्वीकारे ।
प्रयोग अस्थायी नम्बर को लागि कुनै पनि रजिष्ट्रेशन
SMSVERIFY आदर्श छ, दर्ता गर्न:
प्रयोगकर्ता प्रमाणित गर्न सक्छन् सबै सामाजिक नेटवर्क जस्तै रूपमा
Facebook, Instagram, ट्विटर, Tumblr, गुगल+
र अन्य सामाजिक नेटवर्क व्यवस्थापन गर्न ।
ई-बे, Aliexpress, अमेजन, Alibaba,
आकाशवाणि, WhatsApp, Viber, WeChat,
Facebook, Snapchat, Skype, लाइन, Tencent, QQ र अरूलाई.
ईमेल & खाता
हामी भेटी प्रमाणित गर्न ( जीमेल, गुगल आवाज,
Microsoft खाता, याहू मेल) प्राप्त लागि एसएमएस सन्देशहरू कुनै पनि साइटहरू र सेवाहरू
कसरी यो काम गर्छ?
हामी काम संग राष्ट्रीय मोबाइल वाहक संग तपाईं प्रदान गर्न पहुँच गर्न एक काम अमेरिकी-आधारित मोबाइल टेलिफोन नम्बर ।
माध्यम हाम्रो सेवा, तपाईं गर्न सक्छन् अनुरोध पहुँच गर्न एक फोन नम्बर प्रयोग र संख्या प्राप्त गर्न एसएमएस सन्देश.
सन्देशहरू वितरित गरिनेछ आफ्नो खातामा सीधा माध्यम हाम्रो साइट छ ।
हो तपाईंको संख्या वास्तविक मोबाइल नम्बर?
हो, यी हुन् वास्तविक मोबाइल नम्बर. तिनीहरूले भर्चुअल र प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ बस बारेमा कुनै पनि सेवा मंच वा साइट प्रयोग पाठ वा कल verification. हामी संग काम मोबाइल फोन प्रदायकहरू त तपाईं गर्न सक्छन् अनुरोध पहुँच गर्न वास्तविक फोन नम्बर प्राप्त गर्न एसएमएस सन्देश. सन्देशहरू वितरित गरिनेछ आफ्नो खातामा सीधा माध्यम हाम्रो साइट छ ।
कति यो लागत गर्छ?
लागत लागि एक प्राप्त एसएमएस देखि सुरु हुन्छ $ 0.01. तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् एक नम्बर free of charge.
कति संख्या तपाईं यो के हो? (हो, तिनीहरूले अद्वितीय? के अन्य प्रयोगकर्ता प्राप्त को नै नम्बर I use?)
संख्या खटाइएको छ. तपाईं मात्र । We don ' t resell एउटै नम्बर दुई पटक ।
How can I use एक भर्चुअल फोन नम्बर प्राप्त गर्न SMS messages online?
प्राप्त गर्न एक एसएमएस मा एक भर्चुअल फोन नम्बर मा हाम्रो सेवा तपाईं आवश्यक छौँ:
एक देश चयन सूची देखि available on the site.
चयन एक मोबाइल अपरेटर (छ भने, यो तपाईं मामला).
चयन गर्नुहोस् साइट वा सेवा जहाँ तपाईं सक्रिय गर्न चाहनुहुन्छ खाता.
त्यसपछि प्रतिलिपि नम्बर र यो प्रयोग गर्न प्राप्त एसएमएस सन्देशहरू देखि छान्नुभएको साइट छ ।
केही मिनेट मा, तपाईं प्राप्त हुनेछ एक पाठ वा एसएमएस कोड मा संगत को पृष्ठ our SMS service.
अब तपाईं कसरी थाह प्राप्त गर्न बिना SMS सन्देशहरू मा एक फोन प्रयोग गरेर अस्थायी फोन नम्बर भाडा ।
smsVERIFY.प्रो संग गरे मा रूस
कपीराइट © 2020 SmsVerify. सबै अधिकार सुरक्षित.
कृपया हामीलाई मदत बनाउन सेवा राम्रो छ । कृपया प्रतिवेदन कुनै पनि त्रुटिहरू फेला अनुवाद गर्न हाम्रो ई-मेल: smsverify.pro@gmail.com